Sidee loo Isticmaalaa Sawirka-Sawirka Sawirkaaga Android
Tilmaame-diiddan Android wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daawato fiidiyowyada aad jeceshahay inta aad joogto
Picture-in-Picture (PiP) waa muuqaal laga heli karo casriga Android oo ku shaqeeya Android 8.0 Oreo iyo ka dib. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad is-badasho. Tusaale ahaan, waxaad raadin kartaa makhaayad markaad sawir la wadaagto saaxiib ama aad daawato cajaladda YouTube markaad ka heleyso tilmaamaha Google Khariidadaha.
Waxay u muuqataa gimmicky, laakiin waa muuqaal fiican oo loogu talagalay dadka badan oo badan oo ka boodaya app ka app. PiP waxay sidoo kale ku habboon tahay haddii aad rabto inaad si fudud u daawato video halkii aad ka bixin lahayd fiiro buuxda, sida fiidyow xiiso leh oo qaadaya waqti aad u dheer si aad u hesho punchline. Qalabkani ma noqon karo wax aad maalin kasta isticmaashid, laakiin waa hubaal inaad ku qanacdo inaad isku daydo. Waxaan ku raaxeysaneynay Sawirka-Sawirka; halkan waa sida loo dejiyo oo loo isticmaalo.
Barnaamijyada u dhigma Sawirka-Sawirka
Tan iyo tani waa qaab muuqaal ah oo Android ah, qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada ugu sareeya ee Google ayaa ku taageeraya sawirka sawirka, oo ay ku jiraan Chrome , YouTube iyo Khariidadaha Google .
Si kastaba ha ahaatee, habka PIP ee YouTube wuxuu u baahan yahay rikoodh loogu talagalay YouTube Red, oo ah xayeysiis la'aan. Nidaamka ku wareegsan waa in la daawado fiidiyowyada YouTube ee Chrome halkii la isticmaali lahaa app-ka YouTube.
Barnaamijyada kale ee la midka ah waxaa ka mid ah VLC, oo ah shabakad muuqaal ah oo fiidiyoow ah, Netflix (iyada oo cusbooneysi loo gelinayo Android 8.1), WhatsApp (video chats), iyo Facebook (videos).
Raadi oo u Isticmaal PiP Apps
Qalabkan kuma habboona barnaamijyada oo idil, waxeeyna ku xiran tahay soo saarayaasha si ay u muujiyaan in app ay taageerto shaqadan (had iyo jeer ma sameeyaan tan). Waxaad arki kartaa liistada dhammaan barnaamijyada ku jira qalabkaaga kaas oo taageera sawirka sawirka. Marka hore hubi in barnaamijyadaaadu ay yihiin kuwo wakhtigu dhammaado, ka dibna:
Tag Qeybaha ku jira casrigaaga ama kiniiniga.
Ku dhufo Barnaamijyada & Wargelinta , ka dibna Horreeya .
Taabo Dhacdooyinka Gaarka ah , ka dibna Sawirka Sawirka.
Markaa waxaad heshaa liis taxane ah oo ku saabsan barnaamijyada taageeraya sawirka sawirka iyo kuwaa oo ay leeyihiin PIP-karti. Si aad u joojiso muuqaalkani ku salaysan hal-app, ku dhufo app, oo ku dhaji Bixinta sawirka sawir-ku- gudubka bidix dhinaca bidixda.
Sida Loo Bilaabo Sawir Sawirka-Sawirka
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu bilaabi karo sawirka-sawirka, iyadoo ku xiran app. Iyadoo Google Chrome, waa inaad gelisaa fiidiyow si buuxda shaashadda, kadibna riix batoonka Guriga. Haddii aad rabto inaad daawato fiidiyowyada YouTube-ka ee Chrome, waxaa jira dhowr tallaabo oo dheeri ah.
Ku soo dhawow bogga internetka, kaas oo laga yaabo inuu u wareego goobta moobiilka (m.youtube.com).
Ku calaamadee icon-ka saddexda ah .
Ku calaamadee sanduuqa ku xiga goobta moobilka .
Xulo fiidiyoow iyo riix ' Play' .
Ku dheji fiidiyow si buuxda shaashadda .
Riix batoonka Home ee qalabkaaga.
On barnaamijka YouTube ah, kaliya bilaabi kartaa daawashada video ah, ka dibna riix badhanka Home . Iyadoo barnaamijyada qaar sida VLC, waa inaad awood u yeelatid muuqaalka barnaamijka ugu horeeya ee app, sida aad ku arki karto shaashadda kor ku xusan. On WhatsApp, markaad ku jirto wicitaan fiidiyow ah, ku dhufo badhanka dambe si aad uhesho sawir-sawirka.
Waxaan rajeyneynaa in geeddi-socodkani uu ugu dambayntii la simo
Xakamaynta Sawirka Sawirka ah
Markaad ogaatay sida loo bilaabi lahaa PiP barnaamijka aad jeceshahay, waxaad arki doontaa daaqada leh fiidiyahaaga ama waxyaabaha kale ee ku yaal dhinaca bidixda ee muuqaalkaaga. Taabo daaqada si aad u eegto koontaroolada: Ciyaar, Fadlan Hore, Rewind, iyo badhanka Faa'iidada, oo kuugu soo celinaya app dhammeystiran shaashadda buuxda. Wixii faylasha ciyaarta, badhanka Fast-Forward wuxuu u guuraa heeska soo socda ee liiska.
Waad ku riixi kartaa daaqadda meel kasta oo shaashadda ah, oo u jiid dhinaca hoose ee shaashadda si aad u deyso.
Qaar ka mid ah barnaamijyada, oo ay ku jiraan YouTube, waxay leeyihiin telefan gaaban oo kuu ogolaanaya inaad ku cayaarto codka asalka ah haddii aadan u baahnayn muuqaal.
Sida Loo Beddelo Iibsiga Android
Sidee ku heleysaa Cool Emojis on Your Android
Ku dir faahfaahinta taleefankaaga gacanta Google ee Kombuyuutarkaaga
Sida loo rakibo Widget on telefoonnada Samsung
Sidee si habboon u bilaabi kartaa telefoonka casriga ee Android ama Tablet
Sida Loo Beddelo Bateriga Barnawada iyo Nabadgelyada
Qormo Xogta Cassaasiga CSS
12 ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee ka shaqeynaya Guriga
Waa maxay sababta Baabuurta baabuurtu u dhintaan xilliga qaboobaha?
Waa kuwee Tim Cook?
Bluetooth on the iPhone: Sida Loo Siman Dhagaysto Songs
Stepper Motors iyo Servo Motors - Xulashada Gawaarida
Grand Theft Auto: Ku xigeenka Sheekooyinka City Cheats ee PSP
Tartanka ugu sareeya 10 Ubuntu
Telefoonada 8da ee ugu wacan ee iibsanaya sannadka 2018
8da Siddeed ee Ugu Fiican ee Baabuurta ah ee Baabuurta ah ee lagu iibsado sannadka 2018
Sidee loo dhisaa koox dabiici ah Legendary Legend Team
Photoshop Sida Loo Adeegsado: Isticmaalka Spin Blur
Waa maxay Vevo? Tafaasiisha Muusikada
9ka Xbox ee ugu fiican ee lagu iibsado sannadka 2018
Dhammaan ku saabsan Google Nexus 7
10 Saacadaha iPad-ka yar ee aad u fududeysid noloshaada
Baahida loo qabo Xawaaraha: Inta badan Loogu Talagalay U - Wii U Review Game
Qodobbada ugu sareeya ee raadinta boggaga internetka qof walba waa inuu ogyahay
Dib u eegid: Braven BRV-XXL Wareeysiiyaha Kumbuyuutarka ee Kumbuyuutarka ah
10 Talooyin degdeg ah oo loogu talagalay Twitter
Lenovo IdeaCenter A730 Dib u Eegista